စက်ရုံ Fungicides | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စက်ရုံ Fungicides ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
fungicides များအသုံးပြုမှုကျန်နေတဲ့အဆိပ်အတောက်များစုစည်းနေခြင်းကနေရရှိလာတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည်နှင့်လိုလားတဲ့ပြောင်းလဲသွားပြီﬁle မြေဆီလွှာတွင်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏(Muthukumar et al.,2010).နောက်ထပ်-နောက်ထပ်,စက်ရုံအတွက်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအကြွင်းအကျန်များအတွက်အလားအလာ(Vanachter et al.,1983)နှင့် phytopathogenic မှိုအတွက် fungicide ခုခံသီးနှံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် fungicides သုံးပြီးအတွက်အချက်များကန့်သတ်ထားပါသည်(Brent,I995).ဓာတုတစ်ဦးမှပစ်မှတ်ရောဂါပိုး၏ခုခံ.ကိုယ့်.အဆိုပါ ef ကိုကနျ့သﬁcacy နှင့် fungicides ၏အသုံးဝင်သောတစ်သက်တာ,အရာထို့နောက်နောက်ထပ် ပို. ပို. မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်မှာဖွံ့ဖြိုးပြီးရမည်ဖြစ်သည်(ma နှင့် Michailides,2005).မီးခိုး-ရေ,စက်ရုံပစ္စည်းကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်ရေအားဖြင့်မီးခိုးပွက်ပွက်နေဖြင့်ထုတ်ပေးသော,အပင်ပေါက်ရန်အတွက်တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီး,ကြီးထွားတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်,နှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအပင်၏အထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်(အလင်းနှင့်ဗန် Staden,2004).ဒါဟာဟော်ရီကာချာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသောခံရဖို့အလားအလာရှိပါတယ်,အထူးသဖြင့်အကုန်အကျပိုးသတ်ဆေးဝယ်ယူရန်အရင်းမြစ်များမရှိဘဲတောင်သူလယ်သမားများအားဖြင့်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/plant-fungicides.html
စက်ရုံ Fungicides ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ Fungicides ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 15,061 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com